UCarey Gillam, umbhali wase-US Ilungelo lokwazi
umbhali: UCarey Gillam
Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Matshi 18: Amajaji afuna ukuva uFrom Ummangali kwakhona
Namhlanje kuphawula ukuqala kweveki yesine yesilingo somhlaza seHardeman V. Monsanto Roundup, kwaye abagwebi bebesaxoxa ngombuzo ekuphela kwawo ekufuneka bewuphendule ukuvala isigaba sokuqala setyala kwaye banokungena kwisigaba sesibini.
Abagwebi abathandathu baxelele iJaji uVince Chhabria ngolwe-Sihlanu ukuba njengokuba bexoxa ngabom bafuna ukuba ubungqina bommangali u-Edwin Hardeman bufundwe kubo. U-Chhabria uthe le nto izakwenzeka kwindawo yokuqala kusasa ngoMvulo.
Ngokwesicelo sikaMonsanto, ityala lahlulwe langamacandelo amabini. Inqanaba lokuqala lijongana nombuzo wokuba ingaba amajoni afumanisa ukuba ukubonakaliswa kukaHardeman kwiRoundup "yinto ebalulekileyo" ekubangeleni i-non-Hodgkin lymphoma.
Ukuba abagwebi baphendule ngazwi linye nguewe kulo mbuzo ityala liya kwisigaba sesibini apho amagqwetha kaHardeman aya kuthi abeke ubungqina obujolise ekuboniseni ukuba uMonsanto wayesazi umngcipheko womhlaza weRoundup kodwa wasebenza ngenkuthalo ukufihla olo lwazi kubathengi, ngokuyinxenye ingxelo yenzululwazi.
Ukuba ityala liya kwinqanaba lesibini, ummangali uyakwenza njalo ukuswela Ingqina elinye eliphambili- uCharles Benbrook - emva ijaji igwebe ukuba uya kubuthintela ngokuqatha ubungqina bukaBenbrook malunga nokuziphatha kukaMonsanto.
Umcebisi okhokelayo kaHardeman u-Aimee Wagstaff kunye nomcebisi wakhe u-Jennifer Moore baceba ukuchitha usuku kwinkundla yamatyala ngoMvulo njengoko ijaji ithe yaxoxa emva kokuphakamisa umsindo kaJaji Chhabria. U-Chhabria wacaphuka ngolwe-Sihlanu kuba amagqwetha ethathe ixesha elide kunokuba ebelindele ukufika enkundleni yamatyala emva kokuba bexelelwe ukuba onke amaqela kufuneka ahlangane ukujongana nesicelo samajoni sokuva ubungqina bukaHardeman kwakhona.
Chhabria wagstaff uWagstaff kwiveki yokuqala yokuxoxwa kwetyala loko wakubiza ngokuba "zizenzo ezininzi zokuziphatha gwenxa ngexesha lokuvula kwakhe ingxelo." Esinye sezikreqo zakhe, ngokuka-Chhabria, ukuchitha ixesha elininzi exelela abachopheli-mthetho malunga nomthengi wakhe kunye nokufumanisa isifo somhlaza.
Ngomhla wesihlanu ku-Epreli 15: Iintengiso zikaGoogle ziphakamisa inkxalabo malunga nokuGwetywa
(QAPHELA 3:30 pm ixesha lePasifiki- IJurors zithatha umhlala phantsi usuku emva kokusilela kwakhona ukufikelela kwisigwebo. Ubungqina obuvela kummangali uEdwin Hardeman ukuba bufundwe buye kwijaji kusasa ngoMvulo ngesicelo sabo. Ijaji uChhabria uhlala ecaphuka ngamagqwetha ommangali, ecatshukisiwe bafike enkundleni ngo-Lwesihlanu emva kwemini.)
Amajaji abuyile enkundleni namhlanje aqala iingxoxo emva kosuku lokuphumla ngoLwesine. Mnye kuphela umbuzo ekufuneka bewuphendulile: "Ngaba uMnu Hardeman wabonisa ngokungakhathali kobungqina bokuba ukubonakaliswa kwakhe kwiRoundup yayiyinto ebalulekileyo ekubangeleni i-lymphoma yakhe engeyiyo iHodgkin?"
Ijaji icebise abagwebi ukuba xa bewucinga lo mbuzo ngomhla wabo wokungabikho akufuneki bafune ulwazi malunga nokhuseleko lweRoundup okanye bafunde amanqaku eendaba okanye izifundo zesayensi ngalo mbandela. Kuya kufuneka bazivalele ekuqwalaseleni kuphela ubungqina obuzisiweyo etyaleni.
Into enomdla kukuba, izolo kwindawo yaseSan Francisco iintengiso zikaGoogle zazivela kwiifowuni ezikrelekrele kunye neekhompyuter ezikhuthaza ukhuseleko lweRoundup. Indawo enye ngokukodwa - Ukhula ngobulumko - ibingena phezulu kwezinye iisayithi zikaGoogle, inikezela ngezihloko ezinje "Ukoyikwa 'kweekhemikhali' ziziphumo zokungaqondani" kwaye "Jonga inzululwazi, ungoyiki amaqhinga, we-glyphosate herbicide." Nale ke - “Umbulali Wokhula Usilele Ukunqongophala Kwinkxaso Yesayensi.”
Intengiso kaGoogle ivuselele uloyiko ngabathile ukuba iMonsanto kunye neBayer inokuthi ibandakanyeke ekwenzeni i-geofencing, igama elisetyenziselwa ukuchaza iqhinga lokuhambisa imiyalezo ethile kubantu abakwiindawo ezithile zejografi.
Kwinyanga ephelileyo igqwetha likaHardeman uJennifer Moore uxelele iJaji uChhabria ngokoyika okugcinwe liqela lezomthetho likaHardeman lokuba uMonsanto kungenzeka ukuba ubekhe wabandakanyeka ekubanjweni kwegeof ngaphambili kwaye angaphinda enze njalo ukuzama ukuphembelela abagwebi. UMoore uxelele ijaji babecinga “ukuba ingaba siza kufaka ifayile yokuthintela okwethutyana ukuthintela iMonsanto kulo naluphi na uhlobo lokubiyela i-geofcing okanye i-joror ejolise kumajelo eendaba ezentlalo okanye kwiintengiso zonqakrazo. Kwaye ke ndiza kucela nje ukuba kungenzeki. Asikwenzi oko kwicala lethu, kodwa andifuni nakuphi na ukujongwa kwabagwebi, amajelo abo eendaba okanye iindlela ze-Intanethi. ”
U-Chhabria uphendule wathi, "ayisiyiyo, ayithandabuzeki ukuba ayizukufaneleka kwaphela? Ngokucacileyo akukho mntu ngapha nangapha - akukho mntu ungaphakathi kwekhulu leemayile macala omabini onokuzama ukujolisa kuwo nawuphi na umyalezo wejouror okanye umntu oza kuba netyala lakhe ngayo nayiphi na imiyalezo. ”
I-geofencing yinkqubo eyaziwayo yentengiso ehambisa umyalezo / umxholo othile kuye nakubani na ngaphakathi kwendawo ethile echongwe yinkampani okanye iqela elihlawulela intengiso. Indawo inokuba ncinci kakhulu, imayile engqonge idilesi ethile, umzekelo. Okanye inokuba nkulu kakhulu. Nabani na okwindawo ekhethiweyo usebenzisa i-app kwifowuni efanelekileyo-enje ngemozulu yesimo sezulu okanye umdlalo-uya kuthi asiwe kwintengiso.
Nokuba uMonsanto wenze okanye akazukusebenzisa iqhinga ukuzama ukuphembelela abagwebi kuya kuba nzima ukubonakalisa. Igqwetha lase Monsanto uBrian Stekloff uphendule kwiinkxalabo eziphakanyiswe kwinyanga ephelileyo kunye nesilumkiso sejaji malunga nokwenza i-geofencing ngelithi “Ndiyaqonda ukuba banokuba nezityholo, kodwa andizamkeli ezo zityholo… .. kunjalo sizakuhlala sizilandela…”
Ukubekwa kweentengiso zikaGoogle kumagama athile ophando akuthethi ukuba nabani na ebejolise kwijurors nge geofencing. Kwaye kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukuthengwa kweentengiso zikaGoogle bekukho- kwaye kuhlala-sisicwangciso esithandwayo esiqeshwe ngamagqwetha abamangali abafuna abathengi abatsha beRoundup.
Ngomhla wamashumi amane aneshumi ku-Matshi 14: Uvavanyo kunye noMhla weJury
AmaJurors anosuku lokuphumla namhlanje kodwa amagqwetha awanalo. U-Chhabria ubambe indlebe kunye namagqwetha omabini amacala ngo-12: 30 emva kwexesha lePasifiki lokuxoxa ngobubanzi besigaba sesibini, ukuba isigaba sesibini sibanjiwe.
Phakathi kwemiba ekuza kuxoxwa ngayo, amagqwetha ommangali ahlaziya isicelo sabo ukuze bakwazi ukubonisa ubungqina malunga nemizamo kaMonsanto yokuhlazisa isazinzulu saseFrance uGilles-Éric Séralini emva kokupapashwa kwiziphumo zophando zakhe zango-2012 malunga neempuku ezondla amanzi athathwe nge-Roundup. Iirekhodi zangaphakathi zeMonsanto zibonisa iinzame ezilungelelanisiweyo zokufumana iphepha laseSeralini lirhoxiswe, kubandakanya lo mtya we-imeyile.
Abasebenzi baseMonsanto kuyacaca ukuba babenebhongo ngoko bakubiza ngokuba "ngumnyhadala wemultimedia owawenzelwe ukuba usasazwe ngokungathandabuzekiyo" ngokuchasene neSeralini kangangokuba bayichonga njenge "mpumelelo" efanele ukwamkelwa.
Ubungqina bubonisa ukuba "ibali laseSéralini lisembindini wokungaphumeleli kukaMonsanto kunye neenzame zokusebenzisa umbono woluntu," utshilo amagqwetha kaEdwin Hardeman. Kananjalo bathi Ukugcwaliswa kwenkundla yabo, "Ubungqina buveza ukuba uMonsanto uphendule kolu phando ngokuzama ukujongela phantsi nokujongela phantsi uGqirha Séralini, obubungqina obuthe kratya" ukuba iMonsanto ayikhathali nokuba imveliso yayo inika abantu umhlaza, "kodwa" [ijolise] endaweni sisebenzisa uluvo loluntu kwaye sijongela phantsi nabani na ophakamisa inkxalabo yokwenene nesemthethweni ngalo mbandela. ” ”
"Ibali laseSéralini liluncedo kwiinzame zikaMonsanto zokujongela phantsi iiNzululwazi eziphakamisa inkxalabo malunga neGlyphosate," abameli bakaHardeman bathi.
Amagqwetha kaHardeman afuna ingqina lengcali uCharles Benbrook ukuvunyelwa ukungqina ngalo mzekelo wokuziphatha ngokudibeneyo kweMonsanto "emva kokusetyenziswa," intsingiselo yesenzo sikaMonsanto esenzeka emva kokuba uHardeman eyekile ukusebenzisa iRoundup.
Ujaji Chhabria ngaphambili wagweba ukuba ubungqina obumalunga neenzame zokuhlazisa uSeralini babungenakwaziswa ngenxa yokuba ezo nzame zenzekile emva kokusetyenziswa kukaHardeman ngeRoundup kwaye ke ngekhe kumchaphazele.
NgoLwesithathu, Chhabria ikwalawula Obo bungqina bemizamo kaMonsanto yokujongela phantsi i-Arhente yaMazwe ngaMazwe yoPhando ngomhlaza emva kokuba ichaze i-glyphosate njenge-carcinogen enokwenzeka ukuba ayizukufakwa kwisigaba sesibini solingo kuba senzekile emva kokusetyenziswa kukaHardeman's Roundup.
Njengamacala omabini alungiselela inqanaba lesibini, ukungabikho kwesigqibo esikhawulezileyo sejaji akukhombisi kakuhle kuHardeman. Amagqwetha akhe ayenethemba lokuthatha isigqibo ngamxhelo mnye ngabagwebi endaweni yabo. Nasiphi na isigqibo esenziwe yijaji masibe ngazwinye okanye ityala lingabhengezwa njengeliphambene.
Ngomhla wamashumi amathathu anesithathu ku-Matshi 13: Ukuxoxisana ngeJury
(QAPHELA 5:45 pm ixesha lePasifiki-Ijaji ithathe umhlala-phantsi ngokuhlwa kungekho sigwebo. Iingxoxo zokuqhubeka kwakhona ngolwesiHlanu.)
Ujaji Chhabria uyalele amagqwetha omabini amacala ukuba akulungele ukwenza ingxelo yokuvula kwesigaba sesibini setyala namhlanje ukuba amajoni angabuya ngale ntsasa ngesigwebo. Isigaba sesibini senzeka kuphela, nangona kunjalo, ukuba abachopheli-tyala baqala ngokufumana ngazwi linye kummangali uEdwin Hardeman kwisigaba sokuqala, esasijongana kuphela nombuzo woko.
Umbuzo ekufuneka uphendulwe kwifom yesigwebo sejaji ichanekile ngokuthe ngqo:
Ngaba uMnu.Hardeman wangqina ubungqina bokuba ukubonakaliswa kwakhe kwiRoundup yayiyinto ebalulekileyo ekubangeleni i-lymphoma yakhe engeyiyo iHodgkin?
Kuya kuthatha bonke abagwebi abathandathu ukuba baphendule ewe kulo mbuzo ukuze ityala liqhubeke. Ukuba abagwebi bahlulelene ngendlela abawuphendula ngayo umbuzo, ijaji ithe iyakubhengeza ukungaziphathi kakuhle.
Ijaji ikhokele abagwebi kwindlela yokuwuthathela ingqalelo loo mbuzo kunye nendlela yokuvavanya ubungqina obunikwe bona kwi Uluhlu lwephepha le-17 yemiyalelo.
Amajaji avumelekile ukuba acele ukujonga kwimiboniso ethile kunye neziqwenga zobungqina kodwa abavumelekanga ukuba babone ukubhalwa kweentsuku zangaphambili zobungqina. Ijaji yathi ukuba amajoni afuna ukuphonononga ubungqina bengqina elithile angacela ukuba ubungqina belo ngqina, okanye inxenye yobungqina bengqina, bafundelwe wona kodwa amagqwetha nejaji kuya kufuneka babekhona kuloo nto.
Ukuba abagwebi babuyisa isigwebo esivuna uHardeman ngolwesiThathu emva kwemini, iingxelo zokuvula zesigaba sesibini ziya kwenzeka ngolwesiHlanu.
U-Chhabria uzibambe ngamandla kwiingxoxo zokuvala ngolwe-Lwesibini, ethintela igqwetha likaHardeman u-Aimee Wagstaff ekuboniseni ifoto ka-Hardeman kunye nenkosikazi yakhe kwintetho yakhe yokuvala isilayidi. Uxelele uWagstaff ukuba le foto "ayichaphazeleki" kwaye wathi "akafuni kuva."
ukuqhubeka nokuxoxa ngale nto. ” Xa wayecela ingqiqo yakhe, u-Chhabria waphindaphinda inkolelo yakhe yokuba ayifanelekanga.
IMonsanto yafaka ifayile ye- isindululo sesigwebo esithe ngqo NgoLwesibini, ephikisa ukuba uHardeman unike ubungqina "obaneleyo," kwaye uhlasele ngokuthembekileyo ugqirha wezifo uDennis Weisenburger, elinye lamangqina aziingcali zikaHardeman. UMgwebi Chhabria wasikhaba isindululo.
Ngokwahlukeneyo, ezayo IPilliod V. Ityala leMonsanto KwiNkundla ePhakamileyo yase-Alameda County e-Oakland yayijonge iqula lamatyala elinabantu abangaphezulu kwama-200. Baceba ukukhetha i-17, enejuri ezili-12 kunye nezinye iindlela ezintlanu. Ityala alinakuqala de kube ngoMatshi 27 okanye ngoMatshi 28 ngenxa yenkqubo ende yokukhetha ijaji.
Ngomhla wamashumi amabini anesibini ku-Matshi 12: Inkxalabo malunga neMiyalelo yeJaji yeJaji
(Umbhalo ovela kwiinkqubo zanamhlanje)
(QAPHELA, nge-3 emva kwemini ixesha lePasifiki-Iingxoxo zokuvala zigqityiwe. Ijaji ifumene imiyalelo yengxoxo.)
Ukuvalwa kweengxoxo kuyaqhubeka ngoLwesibini. Kwisigaba sokuqala sikaHardeman V. Monsanto owamisa ummangali u-Edwin Hardeman amagqwetha akhupha isichaso esomeleleyo kwizicwangciso zikaJaji Vince Chhabria zokuyalela ijaji malunga nendlela yokuwujonga umba we-causation.
Indlela uChhabria ayibeke ngayo imiyalelo yakhe yenza ukuba "akunakwenzeka" ukuba uHardeman aphumelele, igqwetha uJennifer Moore wabhala encwadini kumgwebi. Umthetho waseCalifornia ubeka imiyalelo yokuba ukubangelwa kubangelwa xa into okanye isenzo "sisinto esibalulekileyo" ekubangeleni iziphumo. Kodwa imiyalelo yejaji ifuna abachopheli-tyala ukuba bafumane ukuba i-Roundup yayiyeyona nto yabangela ukuba i-Hardeman's non-Hodgkin lymphoma, u-Moore waphikisa.
Ujaji Chhabria uphendule ngokuthi akakwazi ukunika "umyalelo oqhelekileyo we-causation waseCalifornia" kuba amagqwetha ommangali ahlulekile ukubonisa ubungqina bokuba umhlaza kaHardeman ubangelwe zizinto ezininzi. Uye wathi, nangona kunjalo, angayiguqula kancinane imiyalelo ukuzama ukulungisa iingxaki. Kwi umyalelo wokugqibelaU-Chhabria wongeze amagama athi i-asubstantial factor "akufuneki ibengoyena nobangela womonakalo."
UMonsanto uphikisile ukuba umhlaza kaHardeman awubangelwa kukuvezwa kwe-glyphosate-based herbicides kodwa kunokwenzeka ngenxa yesifo se-hepatitis C Hardeman ebineminyaka emininzi.
Esi sisixhobo esincinci esinomdla kwimiyalelo yejaji:
Okwangoku, kolandelayo IPilliod V. Ityala leMonsanto, ukumanyelwa kwesindululo kunye nokuxoxwa kwamabango obunzima kwabo baya kuba lijaji kuqala kwiveki ezayo kwiNkundla ePhakamileyo yase-Alameda County e-Oakland, hayi kude nedolophu yaseSan Francisco apho ityala likaHardeman lisenokuqhubeka ukuba liya kwinqanaba lesibini.
Iingxelo zokuvula kwityala le-Pilliod zingaqala ngo-Matshi 21 kodwa kunokwenzeka ukuba zenzeke ngo-Matshi 25 okanye kamva kuxhomekeke ekubeni inkqubo yokukhetha ijaji ithatha ixesha elingakanani.
Ngomhla ka-11 Matshi 2019: iHepatitis C kunye noHugh Grant?
(Jonga uhlaziyo lwevidiyo apha)
(Umbhalo oqhubekayo kule mihlas)
Iqela lezomthetho likaMonsanto ngoMvulo libonise ubungqina bukaGqirha Alexandra Levine, ugqirha wegazi / oncologist kwiSixeko seThemba iZiko loMhlaza eliBanzi, efuna ukukholisa ijaji ukuba ukubhencwa kwimichiza yokubulala ukhula eglyphosate-based yayingengonobangela womhlaza kaHardeman, kwaye I-hepatitis C Hardeman yayineminyaka emininzi. U-Levine wangqina ukuba ukhe wabona “ezininzi, ezininzi, amawaka ezigulana ezine-non-Hodgkin's lymphoma,” kwaye uthathwa njengengcali kweso sifo.
Ujaji Chhabria uthe kwiveki ephelileyo angathanda ukubona inqanaba lokuqala letyala lisongwa kwiveki ephelileyo, ethetha ukuba ityala kufanele ukuba lixoxwe kungekudala. Isigwebo sifuna ukuba bonke abagwebi abathandathu bavumelane ekufumaneni kwabo malunga nokuba ukubonwa kukaHardeman kwiRoundup "bekuyinto ebalulekileyo" ebangela umhlaza wakhe. Ijaji iya kuchazela amajaji ukuba kuthetha ntoni oko. (Jonga ukungena kwangoLwesihlanu ngeenkcukacha ezithe kratya.)
Ukuba ijaji ayihambisani nesigqibo sokuba nguHardeman okanye uMonsanto ke ityala liya kuba yimpazamo. U-Chhabria ukwathe ukuba oko kuyenzeka ucinga ngokuzama kwakhona ngoMeyi.
Ukuba ijaji ifumene i-Hardeman kwi-causation, ityala liza kukhawuleza liye kwiSigaba II lisebenzisa i-jury efanayo. Kwaye kulapho izinto ziya kuqala khona ukuba nomdla. Amagqwetha kaHardeman cwangcisa ukubiza Abaphathi abaninzi beMonsanto kubungqina, kubandakanya owayenguSihlalo weMonsanto kunye ne-CEO uHugh Grant. UGrant uchithe ngaphezulu kweminyaka engama-35 kule nkampani kwaye wabizwa njenge-CEO ngo-2003. Wayekhokela le nkampani de yayokufunyanwa yiBayer AG kwihlobo ephelileyo.
Ukongeza, amagqwetha kaHardeman acwangcisa ukubiza uRoger McClellan, umhleli wephepha lezenzululwaziUphengululo oluBalulekileyo kwiToxicology(CRT), epapashe uthotho lwamaphepha ngoSeptemba 2016 owakhalimela ukufunyanwa yi-Arhente yaMazwe ngaMazwe yoPhando ngomhlaza (IARC) efumanisa ukuba i-glyphosate yinto enokubangela i-carcinogen yabantu. Amaphepha ekuthiwa abhalwe ngoososayensi abazimeleyo abafumanise ukuba ubunzima bobungqina babonisa ukuba umbulali wokhula wayengenakufane abeke emngciphekweni we-carcinogenic ebantwini.
kunjalo, Amaxwebhu angaphakathi eMonsantobonisa ukuba amaphepha acacisiwe kwasekuqaleni njengesicwangciso seMonsanto sokuhlazisa i-IARC. Enye yeenzululwazi eziphambili zeMonsanto kungekuphela njeyahlaziya le mibhalo-ngqangikodwa sasinesandla ekuyileni nasekuhleleni, nangona oko kungakhange kuvezwe yiCRT.
Amagqwetha kaHardeman ongezelelweyo athi acwangcise ukufowuna UDoreen Manchester, ye-Croplife America, umbutho we-agrochemical's lobbying umbutho. Indima kaManchester kwiCropLife ibisoloko inceda “ukukhokela kumanyano lwamazwe kunye noluntu ukuxhasa imiba yolawulo lwezibulali zinambuzane.”
Ngomhla wesihlanu ku-Epreli 8: Isigaba soku-2019 sikufuphi, iiJaji ziyaCinga ngeMiyalelo yeJury
Amagqwetha ommangali u-Edwin Hardeman aphumle ityala labo ngolwe-Sihlanu, enika uMonsanto ithuba lokubeka amangqina akhe kwesi sigaba sokuqala setyala.
Ujaji Chhabria uxele ukuba angathanda ukubona inqanaba lokuqala letyala lisongwa ekuqaleni kwiveki ezayo, kwaye uyalele amagqwetha omabini amacala ukuba akulungele ukuxoxa nokuxoxa. iiseti ezimbini zemiyalelo ecetywayo ukuze anike ijaji malunga neengxoxo malunga nenkcazo ye "causation."
Ityala likaHardeman ukuba livunyelwe ukuba liqhubele phambili kwiSigaba 2 apho kunokunikezelwa ngomonakalo, iqela lamajaji amathandathu kufuneka livume ngokufanayo ekufumaneni ukuba iRoundup ibangele ukuba ingeyo-Hodgkin lymphoma, ke imiyalelo yejaji malunga nendlela ichazwa ngayo into yingongoma ebalulekileyo.
Inketho yokuqala yejaji ifundeka ngolu hlobo lulandelayo: “Ukuphumelela kumbandela wonyango, Mnu. Hardeman kufuneka abonakalise ngokungathandabuzeki kobungqina bokuba iRoundup yayiyeyona nto ibalulekileyo ekubangeleni i-non-Hodgkin's lymphoma. Into ebaluleke kakhulu yinto umntu oqiqayo anokuyijonga ukuba negalelo kulonzakalo. Ukuba awugqibi ekubeni uMnu.Hardeman ubonakalisile ukuba ukubonakaliswa kwakhe kwiRoundup yayiyinto ebalulekileyo ekubangeleni i-NHL yakhe, kuya kufuneka ufumane uMnu Hardeman nokuba uyakholelwa.nabanye oothunywashe abasemngciphekweni. ”
Ukhetho lwesibini lwejaji lunemigca emithathu yokuqala njengokhetho lokuqala kodwa ke longeze oku: "Ukuziphatha akuyonto ibalulekileyo ekonzakaleni ukuba ukwenzakala okufanayo ngekwenzekile ngaphandle kwendlela yokuziphatha. "
Ukhetho 2 lutshintsha umgca wokugqibela wemiyalelo kuthiwe: “Nangona kunjalo, ukuba ugqiba kwelokuba uMnu. Hardeman uqinisekisile ukuba ukubonakaliswa kwakhe kwi-Roundup kwakwanele ukubangela i-NHL yakhe, kuya kufuneka ke umfumanele uMnu Hardemaneven ukuba uyakholelwa ukuba ezinye izinto ezinobungozi bezanele ukubangela i-NHL yakhe. ”
Inxalenye enkulu yokuzikhusela kukaMonsanto yile ukucebisa ukuba ezinye izinto zingangunobangela womhlaza kaHardeman, kubandakanya umzabalazo we-hepatitis C. Iqela likaHardeman lithe waphiliswa ngo-2006 wesifo sokudumba kwesibindi C kodwa iqela likaMonsanto lithi umonakalo weseli kwi-hepatitis wawunokuba negalelo kumhlaza wakhe.
Ingqina lengcali yeMonsanto uGqirha Daniel Arber Kwingxelo yakhe yangaphambi kokuvavanywa kwetyala Ubhale ukuba uHardeman unemingcipheko emininzi ye-NHL, wathi: “Akukho nto ibonisa ukuba i-Roundup idlale nayiphi na indima kuphuhliso lwe-NHL yakhe,
kwaye akukho zimpawu zibonisa ukuba unobangela wale lymphoma. ”
Ujaji Chhabria ugwebe ukuba u-Arber akanakho ukungqina ukuba i-hepatitis C yabangela i-NHL ka-Hardeman kodwa bulawula ngoLwesineukuba u-Arber unokuchaza ukuba ukubonwa kukaHardeman ixesha elide kwi-hepatitis C kumshiye esemngciphekweni wokuphuhlisa i-NHL nasemva kokuba intsholongwane yakhe inyangwe ngempumelelo.
Amaxwebhu amatsha aliqela afayilisiwe ngawo omabini amaqela anxulumene nobungqina kunye nemiyalelo yejaji. Bona kwi Iphepha leMonsanto Amaphepha eHardeman.
Ngomhla wesixhenxe ku-Matshi 7: uMgwebi unamagama angqwabalala eMonsanto
UJaji Vince Chhabria ikhuphe impendulo ehlabayo Isindululo sikaMonsanto sokugweba ngesishwankathelo ngoLwesine, echaza ngokomyalelo wakhe wokuba kukho ubungqina obuninzi bokuba inkampani ye-glyphosate herbicides- eyile Roundup- inokubangela umhlaza kommangali uEdwin Hardeman.
"Ukuthatha nje umzekelo omnye," ijaji yabhala, "iDe Roos (2003) ixhasa isigqibo sokuba iglyphosate iyinto enobungozi kwi-NHL, ukanti iMonsanto iyasilela ukuyikhankanya. IMonsanto ayinakuphumelela kwisindululo sesishwankathelo ngokutyeshela ubungqina obukhulu. ”
Uye wathi "bukhona ubungqina obaneleyo" bokuxhasa isohlwayo somonakalo kwiMonsanto ukuba ijaji ifumana uHardeman.
"Abamangali bazise ubungqina obuninzi bokuba uMonsanto khange ayithathe iyindlela ethe ngqo, ekhuselekileyo kukhuseleko lwemveliso yayo," utshilo uJaji Chhabria kwisigwebo sakhe.
Ijaji iqukumbele ngelithi: “Nangona ubungqina bokuba iRoundup ibangela umhlaza ububulungisa, kukho ubungqina obunamandla apho ijaji inokugqiba kwelokuba iMonsanto ayikhathali nokuba imveliso yayo inika abantu umhlaza, ijolise ekusebenziseni uluvo loluntu kunye nokusingela phantsi nabani na iphakamisa inkxalabo yokwenene engekho semthethweni ngalo mbandela. ”
Nge-Matshi 7, 2019: Akukho Tyala Namhlanje, kodwa ibali malunga novavanyo lokugqibela
(QAPHELA-Jonga uTim Litzenburg ikhawuntala yebango kwaye isindululo sokubetha)
Kodwa ngasemva kwembonakalo yoloyiso, emva kwetyala lokuqala lokuqala lomhlaza eRoundup kubangele ukuba amagqwetha kaJohnson athabathe idabi elishushu lezomthetho, ngezityholo zokurhweba, ukusebenzisa iziyobisi kunye "nokunganyaniseki nokungaziphathi kakuhle."
Kwityala Kwaye kwafakwa isimangalo kwiNkundla yeSekethe yeOrange County eVirginia, iMiller Law Firm ityhola igqwetha uTim Litzenburg, umntu ozibonakalise njengegqwetha elikhokelayo likaJohnson, lokuba ulwazi lolwazi oluyimfihlo lwabathengi ngenjongo yokuseka inkampani yakhe eyahlukileyo, nanjengoko wayengaphumeleli ukubonisa iintlanganiso zokulungiselela ityala likaJohnson. Isikhalazo sikwabonisa ukuba uLitzenburg uvumile ukusebenzisa iziyobisi ngexesha likaJohnson.
I-Litzenburg, ngoku enxulumene nefemu ye IKincheloe, iLitzenburg kunye nePendleton, khange aphendule kwisicelo sokubeka izimvo, ngaphandle kokuthi "yayililishwa eliphazamisayo" emsebenzini wakhe kwinkampani yakhe entsha. Kwiingxelo ezidlulileyo uLitzenburg uchaze ukwahlukana kwakhe neMiller Firm ngenxa yokungaqondani noMike Miller, omnye wabaseki benkampani.
Oku kulandelayo zizicatshulwa ezivela kwimbambano:
I-Litzenburg iqinisekisa ukuba amabango e-Miller Firm nxamnye naye "ayathandeka kwaye aqhelekile ukuba abe yintsomi" kwaye kungenxa yoloyiko lwe-Miller Firm lokuba bazakuphulukana nabathengi be-Roundup kwinkampani entsha ye-Litzenburg. Ubanga ukuba wanikwa i-1 yezigidi zeedola ngumsunguli oqinileyo uMike Miller ukuba ahambe kude nabathengi bakhe beRoundup kodwa wasala isipho.
Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Epreli: kusondele ukuphela kwesigaba sokuqala
(Umbhalo osusela namhlanje inkqubo)
Ingqina lengcali lommangali uGqirha Dennis Weisenburger wayexilongwa ngolwe-Lwesithathu ngamagqwetha aseMonsanto emva kobungqina obuthe ngqo bexhoba lomhlaza uEdwin Hardeman. Amagqwetha kaHardeman athi sele eza kusondela esiphelweni sesigaba sokuqala sokuveza ityala labo.
U-Weisenburger, ugqirha wezifo ogxile ekufundeni oonobangela be-non-Hodgkin lymphoma, wangqina ngolwe-Lwesibini ngaphezulu kweeyure ezine, ehamba ngee-jurors ngobungqina benzululwazi athi ibonisa ukuba i-Roundup herbicide kaMonsanto "ingunobangela omkhulu" womhlaza kubantu abatyhilekileyo. Walandela ubungqina bukaHardeman, owayethethe ixesha elingaphantsi kweyure ephantsi kovavanyo oluthe ngqo malunga nokusebenzisa kwakhe iRoundup amashumi eminyaka ngaphambi kokuba afumane isifo somhlaza kwi-2016.
Guardian waphinda ubungqina bukaHardemanapho wathi wafafaza iRoundup kanye ngenyanga kangangeeyure ezintathu ukuya kwezine ngexesha elijikeleze ipropathi yakhe kwaye ngamanye amaxesha wayeziva ngathi kukungqonga kwemichiza kulusu lwakhe.
Amagqwetha ommangali kulindeleke ukuba aphumle ityala labo namhlanje kodwa ubungqina buka Weisenburger bubaleke ixesha elide kangangokuba ngoku baceba ukuliphumula ityala xa inkundla iqhubeka ngolwe-Sihlanu. Akukho nkqubo icwangciselwe uLwesine.
Jonga amaxwebhu aphathelele kubungqina kwi Iphepha leMonsanto Papers.
Ngokwahlukeneyo, amagqwetha ahlanganisene kwiNkundla ePhakamileyo yase-Alameda ukuze amamele "uSargon" ngaphambi kokuqala kuka-Matshi 18 UPilliod V. Monsanto. Ityala likaPilliod liza kuba lelesithathu ukuya kwilingo elicela umngeni iMonsanto kunye nomnini wayo omtsha uBayer ngaphezulu kwesityholo se-carcinogenicity yeemveliso zeRoundup. Jonga amaxwebhu ePilliod kule khonkco.
Ngomhla wesihlanu ku-Epreli 5: uHardeman wokuNgqina, iJuror yokuGula okanye hayi
Emva kwekhefu lobungqina ngoMvulo ngenxa yejaji egulayo, ixhoba lomhlaza uEdwin Hardeman kulindeleke ukuba athathe indawo namhlanje kwityala eliqhubekayo lomhlaza eRoundup kwinkundla yomanyano eSan Francisco. Ubungqina bakhe kulindeleke ukuba bube ngaphantsi kweyure.
Ujaji Chhabria ubonise ukuba ityala liza kuqhubeka nanamhlanje ngaphandle kwegqwetha labasetyhini ukuba uyagula. Ngamajaji amathandathu kuphela ekufuneka ityala liqhubele phambili kwaye kungoku nje asixhenxe.
Uvavanyo olungqalileyo lukaHardeman, amagqwetha akhe acwangcise ukuzisa inkundla i-2-gallon, pump-up sprayer ukubonisa indlela ayisebenzisa ngayo i-Roundup kwipropathi yakhe iminyaka; indlela ukubonakaliswa kwakhe okuphindaphindiweyo kwenzeka ngayo. Amagqwetha eMonsanto ngoMvulo aye afuna ukusicwangcisa isicwangciso sokutshiza, esithi “iyakumema ijaji ukuba yenze uqikelelo malunga nokusetyenziswa kwesitshizi kunokuba nefuthe ekuchazekeni…” kodwa uChhabria wema kwicala lamagqwetha kaHardeman, esithi uza kuvumela isishwankathelo umboniso nesitshizi. Ude wenza isiqhulo:
INKUNDLA: Ndiyathetha, isikhokelo esinye esiluncedo endinokusinika sona ngoku kukuba abaMangali abavumelekanga ukukutshiza ngesitshizi.
NKSK. UMATTHEWS (igqwetha leMonsanto): Kulungile.
INKUNDLA: Kwaye ngokuqinisekileyo abavumelekanga ukundilalela ngesitshizi.
Kwelinye inyathelo eliqhwatyelwe izandla liqela lezomthetho likaHardeman, uChhabria uthe ngoMvulo ubungqina malunga "nengxelo kaParry" bunokuziswa kubameli. UMonsanto wakhanyela kodwa ijaji yavumelana nommangali "ukuba kuvulwe umnyango kwingxelo kaParry" yimizamo kaMonsanto yokuphikisa ubungqina bokubulawa kwe-genotoxicity kunye ne-glyphosate herbicides. UGqirha James Parry wayengumcebisi oqeshwe yiMonsanto kwii-1990s ukujonga ubunzima bezinto ezinxamnye ne-genotoxicity eziphakanyiswe ngelo xesha ngoososayensi bangaphandle. Ingxelo kaParry yacebisa ukuba iMonsanto yenze izifundo ezongezelelweyo "ukucacisa umsebenzi onokubakho we-genotoxic" weglyphosate.
Jonga le snippet ukusuka Ingxoxo yangoMvulo kwesi sihloko:
INKUNDLA: Kulungile. Ewe, iMonsanto inengxelo evela kugqirha
ukuba iqeshe lonto- iphakamise inkxalabo malunga
genotoxicity of glyphosate.Ngoko kubonakala kum ukuba uyi - sele uthethile into kwijaji-nangaphambi kokuba sifike kwisibini sakho
inqaku, sele uthethile into kwi-jury engaphikiswa kwinqanaba ukuya kuxwebhu lwangaphakathi lweMonsanto. I-Andso kutheni le nto kungafuneki babenakho ukubeka ukungathandabuzeki kwisigqibo sikaMonsanto kwi-jury yokuba i-genotox ayinamsebenzi ngokuseka ukuba uMonsanto uqeshe ugqirha- okanye aqeshe
Ingcali yokujonga umba we-genotoxicity ngasekupheleni kweminyaka yee-90s kwaye ingcali yaphakamisa inkxalabo malunga ne-genotoxicity? … Ndiyathetha, iMonsanto yona iphande nge-genotox -yazisa umntu ukuba aphande nge-genotox, kwaye loo mntu ugqibe loo genotox -kungenzeka ukuba yi-genotoxic.
Emva kobungqina bukaHardeman, emva koko ube yingcali ingqina uDennis Weisenburger, Unjingalwazi weSebe lePathology leZiko lezeMpilo leSixeko sase-Omaha, Nebraska.
Ngomhla wamashumi amane anesithandathu ku-Epreli: ixhoba lomhlaza ukuba lime (hayi.)
Ummangali uEdwin Hardeman wayecwangciselwe ukuthatha indawo namhlanje kunye nengcali ingqina uDennis Weisenburger, Unjingalwazi weSebe lePathology leZiko lezeMpilo leSixeko sase-Omaha, Nebraska.
Kodwa elinye igqwetha kubonakala ngathi ligula kakhulu ukuba linyamezele usuku olude lokuvavanywa kobungqina.
U-Weisenburger, ojolise kakhulu kufundo lwe-non-Hodgkin lymphoma (NHL), wayelingqina eliphambili kwichibi labamangali kunyaka ophelileyo xa wayenikela ubungqina phambi kweJaji uVince Chhabria njengoko ijaji yayilinganisa ngoko okanye hayi ukuvumela ubunzima beRoundup amabango omhlaza aya phambili. I-Weisenburger ipapashe ngaphezulu kwama-50 amaphepha kwiijenali ezijongwe ngoontanga malunga nezizathu zeNHL.
Phambi kweendaba zokulibaziseka kwetyala, abamangali babelindele ukuba bayokulibeka kwakhona ityala labo ngolwe-Lwesibini, amangqina kaMonsanto ayemile ngoLwesithathu. Isigaba sokuqala setyala belilindelwe ukuba sigqitywe ngolwesiHlanu okanye ngoMvulo, utshilo amagqwetha.
Ityala liza kuhamba kwisigaba sesibini ukuba abagwebi baqale bavuma ukuba ukubonakaliswa kukaHardeman kwiRoundup yayingunobangela we-non-Hodgkin lymphoma.
U-Hardeman wasebenzisa i-Roundup ukusuka ekunyangeni ukhula kunye nokugqithisa kwipropathi ye-acre ezingama-56 yena kunye nenkosikazi yakhe kwi-Sonoma County. Uye waxela ukuba usebenzisa iRoundup kunye / okanye nemveliso ezinxulumene neMonsanto ukusuka ngo-1986 ukuya ku-2012. UHardeman wafunyaniswa ene-B-cell NHL ngoFebruwari ka-2015.
Ngaphandle kwejaji ekhoyo ijaji ijolise kwingxoxo yobungqina obuninzi bamagqwetha kaHardeman afuna ukwazisa kwisigaba sokuqala, esithi uMonsanto "wavula umnyango" wobungqina bokuba kungenjalo akuvumelekanga. Bona i Ingxoxo yommangali yokwazisa ubungqina obunxulumene nesifundo sempuku esinempikiswano esivela kwii-1980s, kunye nobungqina obunxulumene iinkxalabo ze-genotoxicity ephakanyiswe ngumcebisi weMonsanto, ngokuchaseneyo,Isikhundla sikaMonsanto kwisifundo sempuku kunye Umcimbi wobuchwephesha.
Abantu kwihlabathi liphela bayalandela ukuxoxwa kwetyala, kwaye isigqibo sejaji kwiveki ephelileyo sokugweba igqwetha elikhokelayo likaHardeman u-Aimee Wagstaff kuthiwa libangele ukhukula kwe-imeyile evela kumagqwetha nakwabanye abantu ababonelela ngenkxaso kwaye bavakalise ingqumbo ngesenzo sejaji.
Ngomhla woku-1 kaMatshi 2019: Into yokuhlafuna
Nantsi ingxoxo enomdla yokuhlafuna ngempelaveki. Ngokujonga ukuphathwa ngokungaqhelekanga kukaJaji Vince Chhabria kwityala lokuqala lomhlaza we-Roundup ukuba lize kwinkundla yomanyano, (jonga ungeniso lwangaphambili lokubhabha kunye neminye imvelaphi) kunye ne-vitriol awayethethe ngayo nommangali u-Edwin Hardeman kwezomthetho, uninzi lwababukeli ubuziwe- yintoni enika? Ukuqhekeka, isigqibo sakhe sokugweba umcebisi okhokelayo, isoyikiso sakhe sokuligxotha ngokupheleleyo eli tyala, kunye nezimvo zakhe eziphindaphindwayo malunga nendlela ubungqina "bentshutshiso" bommangali, ngokucacileyo obubonakala buxhasa ukuzikhusela kukaMonsanto, ubuncinci kumanqanaba okuqala olingo. Ngaba kunokwenzeka ukuba kubekho unxibelelwano phakathi kweChabria neMonsanto?
I-Chhabria inemvelaphi entle ye-stellar. Uzalelwe wakhulela eCalifornia, wafumana isidanga sakhe somthetho ngo-1998 kwiYunivesithi yaseCalifornia, eBerkeley School of Law, waphumelela izidanga. Usebenze njengonobhala wezomthetho kwiijaji ezimbini zomdibaniso kunye nakwiNkundla ePhakamileyo yezoBulungisa uStephen Breyer kwaye wasebenza njengendibaniselwano yeefemu ezimbini zomthetho ngaphambi kokujoyina iOfisi yeGqwetha leSan Francisco City apho ebesebenza khona ukusukela ngo-2005 ukuya ku-2013. ibambe ngoku ehlotyeni lowama-2013.
Kodwa okubangela umdla kukuba, enye yeefemu zomthetho apho uChhabria wayesebenza khona iphakamise iinkophe.ICovington kunye neBurling, I-LLP, ngumkhuseli owaziwayo weendlela ezahlukeneyo zomdibaniso, kubandakanya iMonsanto Co Covington Ingxelo yesixhobo ekuncedeni iMonsanto ikhusele ngokuchasene nayo iinkxalabo zeshishini lobisi ngaphezulu kwenkxaso yokwenziwa kweenkomo yokukhulisa i-bovine, eyaziwa ngokuba yi-rBGH (yehomoni ekhulayo yokukhulisa iinkomo) okanye igama lePosilac.
U-Chhabria wasebenza e-firm phakathi kwe-2002-2004, ixesha apho idabi laseMonsanto elisemthethweni kwi-Posilac lalikwigiyeri ephezulu. Kuxelwe ukuba ubandakanyekile kulo mbandelangokuyinxenye "ngokuthumela iileta kuwo onke amaprosesa obisi e-US, elumkisa ukuba bajongane neziphumo ezinokubakho kwezomthetho ukuba babiza iimveliso zabathengi" njenge-rbGH-Simahla. "
ICovington mhlawumbi yaziwa kakhulu ngomsebenzi wayo kwishishini lecuba. Ijaji eMinnesota ngo-1997 Walawula ukuba ifemu wayeyikhathalele ngabom imiyalelo yenkundla yokuguqula amaxwebhu athile aphathelele kumabango okuba ishishini lecuba lenze iyelenqe leminyaka engama-40 lokulahlekisa uluntu malunga nefuthe lezempilo lokutshaya nokufihla uphando lwezenzululwazi olonakalisayo kuluntu.
Kungekudala ngaphambi kokuba u-Obama akhethe i-Chhabria kwisigwebo sakhe sobumbano, uninzi lwamagqwetha ase-Covington nase-Burling athathe amabala kulawulo, kubandakanya iGqwetha Jikelele u-Eric Holder kunye nosekela-ntloko yabasebenzi UDaniel Suleiman. MnaKuxelwe ukuba abasebenzi beenkampani zomthetho banegalelo elingaphezulu kweedola ezingama-340,000 kwiphulo lika-Obama.
Ukuhlala kukaChhabria eCovington kwakumfutshane, ukuze uqiniseke. Akukho bungqina bubonakalayo I-Chhabria yakha yamela iimfuno zikaMonsanto ngokuthe ngqo. Kodwa akayena mntu ungaziwayo kwilizwe lamandla kunye nefuthe, kwaye indlela amachaphaza adibanisa ngayo kule meko ayikacaci.
NgoFebruwari 28, 2019: Uvavanyo luya kuthatha usuku
NgoLwesine ziintsuku 'ezimnyama' kuvavanyo lomhlaza we-Roundup, okuthetha ukuba amagqwetha, amagqwetha kunye namangqina banosuku lokubamba umoya kunye nokuzidibanisa. Kwaye emva kokukhawuleza kunye nomsindo kwiintsuku ezintathu zokuqala kwetyala, banokusebenzisa ikhefu.
Emva kokuphulukana nelinye igqwetha ngoLwesithathu ekuseni, laqhubeka ityala ngobungqina bengqina lobuchwephe lengqina kunye nososayensi wangaphambili wase-US uChristopher Portier. Ubungqina babonelelwa ngevidiyo erekhodwe e-Australia kwiveki ephelileyo.
Ngexesha lekhefu emva kwemini kubungqina bukaPortier, uJaji Chhabria uthathe umzuzwana ukuzichaza ngezimvo ezithile azenzileyo kummangali omkhulu u-Aimee Wagstaff ngolwe-Lwesibini phambi emgweba ngento ayithethileyo kukungaziphathi kakuhle kwingxelo yakhe yokuvula kwijaji. (jonga kuqala ukungena kwebhlog ngeenkcukacha.)
Oku kulandelayo yinkcazo emfutshane:
INKUNDLA: Phambi kokuba sizise ijaji, ndifuna njalo
yenza ingxelo ekhawulezayo kuNks. Wagstaff.
Bendibonisa ukuva kwe-OSC phezolo, kwaye mna
Ndifuna ukucacisa into ibenye. Ndinike uluhlu lwezizathu zokuba kutheni
ndicinga ukuba indlela oziphethe ngayo ibiyinjongo, kwaye esinye sezizathu
Ngaba ububonakala ngathi uzilungiselele kwangaphambili -
ungafumana ixesha elinzima lokophula umthetho
izigwebo. Ukuchaza oko, ndisebenzise igama elithi "steely," kwaye mna
Ndifuna ukuyicacisa into ebendithetha ngayo.
Ndisebenzisa ngokuzithemba njengesichazi sokuzi-ayina,
oko kukuthi uzilungiselele into enzima kwaye
engathandekiyo. Inqaku lam yayikukuba andibonanga ndothukile kuwe
inxalenye; nanjengoko amagqwetha esiba ngathi ayothuka xa ekho
ndityholwa ngokwaphula imithetho yamatyala, oko kwakufanelekile kum
kumcimbi wenjongo. Kodwa u "steely" unenye intsingiselo njenge
Kulungile, eyona nto imbi kakhulu. Kwaye ndifuna ukukuqinisekisa
ayisiyiyo intsingiselo ebendiyisebenzisa okanye nam bendingenguye
ukucebisa nantoni na malunga neempawu zakho ngokubanzi.
Ke ndiyazi ukuba uyaqhubeka ukungavumelani nomthetho wam kunye nowam
Iziphumo malunga nenjongo, kodwa bendifuna ukuyenza loo nto
NKSK. WAGSTAFF: Enkosi, Mbeko.
NgoFebruwari 27, 2019: Izisongelo zoMthetho kunye neeJokes zeJaji
(QAPHELA-Elinye igqwetha lisandul 'ukugxothwa. Elinye lamatyala asixhenxe abasetyhini lagxothwa kwinkqubo yentsasa. Oko kushiya indoda enye kunye nabasetyhini abathandathu. Kufuneka abagwebi abathandathu kwaye bonke kufuneka babe ngazwinye kwisigwebo sabo.)
Njengomhla wesithathu uvulwa kwityala lokuqala lomdibaniso malunga neemveliso zikaMonsanto zeRoundup zinokubangela umhlaza, iJaji yeSithili sase-US uVince Chhabria ukwenze kwacaca ukuba akalithandi iqela lezomthetho lika-Edwin Hardeman.
Chhabria ngolwe-Lwesibini ikhuphe isigqibo Esohlwaya igqwetha elikhokelayo likaHardeman uAimee Wagstaff malunga noko ijaji ikubone “njengezinto ezininzi zokuziphatha gwenxa,” wamhlawulisa i-500 yeedola kwaye emyalela ukuba anike uluhlu lwabo bonke abanye kwiqela lakhe abathathe inxaxheba ekuyileni ingxelo yakhe yokuvula ukuze abo baqondisi-mthetho nabo bohlwaywe. .
Emngciphekweni-iintetho ezahlukeneyo ezenziwe nguWagstaff ezithi iJaji uChhabria zigqithile kwizithintelo ezibekiweyo kubungqina obunokuviwa lijaji. I-Chhabria ifuna abagwebi beve kuphela malunga nobungqina besayensi ngaphandle komxholo malunga nokuziphatha kukaMonsanto befuna ukuphembelela irekhodi lesayensi kunye nolwazi lweziphumo ezithile zesayensi. Ukongeza, nangona bekungekho zithintelo kwindawo yokungeniswa kommangali u-Hardeman kwijaji, ijaji yaphikisana nendlela ka-Wagstaff yokwazisa kunye nenkcazo yendlela afunde ngayo ukuba une-non-Hodgkin lymphoma.
Kwiinkqubo zangoMvulo Umgwebi wawucacisa umsindo wakhe kuWagstaff, wamphazamisa amaxesha amaninzi njengoko wayethetha nejaji kwaye emyalela ukuba atshintshe intetho yakhe. Uye wayalela ijaji ngaphezulu kwesihlandlo esinye ukuba ingakuqwalaseli oko kuthethwa nguWagstaff njengobungqina.
Kwinkundla ngolwe-Lwesibini, wamohlwaya uWagstaff kwaye wathi uyayazi ukuba isenzo sakhe sijolise ngenjongo zokutyeshela imiyalelo yakhe kuba khange abune phantsi "kokumhlasela kakhulu" enkundleni ngoMvulo ngexesha lokuvula kwakhe.
Apha ngezantsi kukho icandelo labo Inkqubo evela ngoLwesibini(Ukubhekisa ku-Moore kuthetha ukuba uJennifer Moore, ongumcebisi ngokubambisana kwityala likaHardeman.)
INKUNDLA: Zonke iintolo zalatha koku ukuba kukukholelwa okubi, kubandakanya, ngendlela, indlela abasabela ngayo uNks. Wagstaff kwizichaso. Wayecacile ukuba ukulungele oko. Uye wazicacisa kakuhle ukuba ndizokuhla nzima kuye. Kwaye waye-kwityala lakhe mhlawumbi, wayezimisele kakhulu ekuphenduleni kokuza kwam nzima kuye kuba wayesazi ukuba kuyeza kwaye wazilungiselela oko.
NKSK. MOORE: Ewe, ndi-Hlonipha, andicingi ukuba ayilunganga; kwaye oko kusekwe kuqikelelo kwinxalenye yeNkundla.
INKUNDLA: Oko kusekwe kuqwalaselo lwam lomzimba kunye nembonakalo yobuso.
NKSK. WAGSTAFF: Ewe, enyanisweni, Mbeko, ndingathanda ukuthetha malunga naloo mzuzu omnye. Inyani yokuba ndinokuphatha usiza phambi kwejaji mayingasetyenziselwa ngokuchasene nam. Kudala ndiza phambi kwakho ngoku, yintoni, iminyaka emithathu. Ke ndiqhele olu nxibelelwano ukubuyela umva. Kwaye inyani yokuba ndizilungiselele nantoni na oyithethileyo kum-kwaye uphazamise intetho yam yokuvula amaxesha ambalwa elandelelana- akufuneki isetyenziswe ngokuchasene nam. Inyani yokuba ndizolile xa undihlasela, akufuneki isetyenziswe nxamnye nam.
INKUNDLA: Bendingakuhlaseli. Ndinyanzelisa imigaqo, imithetho yangaphambi kokuthethwa kwangaphambili.
NKSK. WAGSTAFF: Utshilo nje into yokuba ndikwazile ukuzenza ubungqina benjongo, kwaye oko akulunganga.
Amagqwetha abamangali kweli tyala akholelwa kwelokuba umyalelo wejaji wokwahlula ityala libe ngamanqanaba amabini kwaye ubuthintele kabukhali ubungqina abanokuthi babunike kwi-jury iyathandeka kakhulu kuMonsanto kwaye ibonakalisa amandla abo wokuhlangabezana nomthwalo wobungqina kwityala. Bakwatsho ukuba isikhokelo sejaji kubuphi ubungqina obunokungena kwaye yintoni engenakudida. Kwaye bachaza ukuba igqwetha likaMonsanto nalo kwizitatimenti zokuvula lazisa ubungqina obabungavunyelwanga ngumgwebi, nangona wayengavunyelwanga.
Apha ngezantsi kukho okungakumbi okusuka Inkqubo yangoLwesibini:
INKUNDLA: Kwaye oko-oko kufanelekile kwinjongo. Oko kuyahambelana nokholo olubi. Into yokuba abaKhalazi bayenze yacaca gca into yokuba banomdla wokufumana olu lwazi kwiSigaba sokuQala bubungqina bokuba yayingeyompazamo nje ukuba kwenzeke ukuba babeke olu lwazi kwiingxelo zabo zokuqala.
NKSK. MOORE: Hlonipha, khange nditsho ukuba besiphelelwe lithemba. Into ebendizama ukuyicacisa kukuba indlela yokumiselwa kwetyala ayiqhelekanga. Kwaye ndiyacinga, Mhloniphekileyo, ukuba uyaqonda ukuba emva kokuphuma komyalelo wokwenza umsebenzi ukuba le yimeko eyahlukileyo apho ulinganisela khona ityala xa sithetha ngemeko enje ngale kwisayensi kuphela kwisigaba sokuqala, kwaye ibangele ukudideka kumacala omabini endlela.
Ihlaya lomhla - ndixelelwe ligqwetha elinqwenela ukuhlala lingachazwanga:
Q: "Ngubani elona gqwetha libalaseleyo likaMonsanto?"
A: "UMgwebi Chhabria."
FEyoMdumba 25, 2019: Ukunika ingxelo kwiNkundla(ii-tweets ezibhalwe apha ngokulandelelana kwexesha)
Ijaji ngoku iyayigxotha i-jury ngekhefu kwaye i-RIP igqwetha lommangali-ithi "iwele umda" kwaye "ayilunganga kwaphela" kwingxelo yayo yokuvula. Uthi esi "sisilumkiso sakhe sokugqibela". Ungaze umzuzu otyhafileyo kwi @BayerUvavanyo lomhlaza weMonsanto Roundup.
Ujaji ukwamxelela ukuba "aqhubeke" xa ezama ukucacisa ukuba @EPAkuvavanya kuphela i-glyphosate kwaye ayiyiyo yonke imveliso.
Uvumelekile ukukhankanywa ngokufutshane kwe @IARCWHOUdidi lwe-glyphosate njenge-carcinogen yomntu enokwenzeka kodwa ijaji iyamsika ngaphambi kokuba athethe kakhulu.
Kwingxelo yokuvula ka @BayerIgqwetha lommangali wommangalelwa iMonsanto Roundup likhomba kuhlalutyo lweemeta ezintsha ezibonisa ubudlelwane obunyanzelekileyo bomhlaza (jonga Ibali lomgcini).
Kwingxelo yokuvula yegqwetha lommangali lommangalelwa ojikelezayo ufunda ukusuka kwi1980s-era @EPAimemo "i-glyphosate ikrokrelwa" kwaye ihamba nebali lendlela iMonsanto eyenze ngayo inguquko yokuxhalaba kwe-EPA. Amajaji ajonge ukudideka yiyo yonke le nto yesayensi.
8: 00 am Kwaye sihambile. Kwiinyanga ezintandathu emva kwejaji yaseCalifornia yagqiba kwelokuba ababulali bokhula bakaMonsanto kubangele umhlaza womgcini wendawo,Elinye ijaji laseCalifornia lilungiselela ukuva iimpikiswano ezifanayo nxamnye neMonsanto.
NgoFebruwari 20, 2019: IJaji ikhethwe
Amagqwetha akachithanga xesha ngoLwesithathu ekukhetheni ijaji yokuqalisa kwetyala kwiveki ezayo. Ijaji lenziwe ngabafazi abasi-7 kunye namadoda amabini. Ukuze ummangali u-Edwin Hardeman aphumelele ityala lakhe, isigwebo sejaji kufuneka sivumelane.
Ityala liyaxoxwa kwizigaba ezibini. Ukuba iijaji azifumani kummangali kwisigaba sokuqala akusayi kubakho sigaba sesibini. Jonga ngezantsi, nge-10 kaJanuwari, iposti ye-2019, ukufumana inkcazo ethe kratya ngomahluko kwizigaba ezibini.
Phambi kwamatyala amagqwetha omabini amacala afake uluhlu oluhlangeneyo lwemiboniso abaceba ukuyazisa, okanye "abanokungenisa", njengobungqina ngexesha lenkqubo. Uluhlu luqhuba amaphepha angama-463 kwaye lubandakanya iirekhodi ezisusela kumashumi eminyaka ye-EPA memos kunye nokutshintshiselana nge-imeyile neMonsanto ukuya kwizifundo zesayensi zamva nje.
NgoFebruwari 19, 2019: I-Minute yokugqibela
Ukulungiselela ukuvulwa kwetyala ngoMvulo kusasa, Ujaji Chhabria uthengoFebruwari 15 ukuva ukuba uyakwahlula bonke abagqatswa bejaji kwiluhlu lweMonsanto abathi bavile ngecala likaJohnson lokubuza imibuzo ethile malunga nolwazi lwabo lwelo tyala.
Ababhali bokufunda, oososayensi abaphezulu abaye basebenzisa iArhente yoKhuseleko lwezeNdalo njengabacebisi, utshilo ubungqina"Ixhasa ikhonkco elinyanzelekileyo" phakathi kokuvezwa kwe-glyphosate-based herbicides kunye nokwanda komngcipheko we-NHL.
NgoFebruwari 8, 2019: Ubungqina kunye neMicimbi- Ngezikhundla eziphezulu, ulingo lokuqala lomhlaza kwi-Roundup olusondela ngokukhawuleza ngoFebruwari 25, amagqwetha eMonsanto- kunye nomnini wayo uBayer AG - babeke uluhlu olude lobungqina kunye nemibaabafuni ukwaziswa xa kuxoxwa ityala.
Phakathi kwezinto inkampani engafuni ukuba zivezwe ematyaleni zezi zilandelayo: Ukukhankanywa kolunye ulwaphulo-mthetho oluchasene neMonsanto; ubungqina malunga nemisebenzi yenkampani yoluntu; uthelekiso nomzi mveliso wecuba; ulwazi malunga nokudibana kwenkampani kunye "neemveliso ezinempikiswano" ezinje ngeAgent Orange kunye neePCB; ulwazi malunga "nobutyebi" bukaMonsanto; kunye nolwazi malunga "nendima kaBayer kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi."
Akukho bungqina uMonsanto afuna ukukhutshelwa ngaphandle kwetyala linento yokwenza nokuba ngaba iyeza lokubulala izitshabalalisi libangele ukuba ummangali anga-Hodgkin lymphoma, amagqwetha enkampani axelele ijaji.
Amagqwetha abamangali anoluhlu lwabo lwezinto abanokukhetha ukungazinikwa kwijaji. Phakathi kwabo: Ulwazi malunga nentengiso yegqwetha labamangali kwityala leRoundup; "imbali yezonyango engahambelaniyo" yommangali uEdwin Hardeman; kunye nobungqina malunga nezigqibo zolawulo lwangaphandle.
Ngeli xesha, ngoFebruwari 6 omabini la maqela afake "uluhlu lokubonisa ulingo ngokudibeneyo" oluchaza ubungqina kunye nobungqina abaceba ukububeka-okanye banokubonisa-kwijaji. Uluhlu luqhuba amaphepha e-314 kwaye lubandakanya uxwebhu lwangaphakathi lweMonsanto kunye namaxwebhu olawulo, izifundo zesayensi, kunye neengxelo ngamangqina eengcali ezahlukeneyo.
UBayer wongeze elinye ilungu kwiqela lezokhuselo leMonsanto Roundup. Ngomhla kaFebruwari 8, u-Shook Hardy kunye nommeli we-Bacon uJames Shepherd wafaka isaziso sakhe sokuvela kwi-Roundup Products Liability Litigation kwinkundla yomanyano. UMelusi ukhusele iBayer ngokuchasene namatyala ohlukeneyo, kubandakanya amabango atyhola ukwenzakala okuboshwe kwiyeza likaBayer lokunciphisa amayeza, kunye nezityholo zokonzakala kwesixhobo se-intrauterine (IUD).
Ngokunjalo, omabini la macala kutshanje afake uluhlu oludibeneyo lwemiboniso yesicwangciso ngasinye sokuziswa kwityala, kubandakanya ukufakwa, iifoto, ii-imeyile, amaxwebhu olawulo, izifundo zesayensi kunye nokunye. Uluhlu lunamaphepha angama-320.
Ujaji Vince Chhabria ubonakalisile kwityala likaFebruwari 4 ukuba xa ijaji ifumana ummangali kwisigaba sokuqala setyala elihlukeneyo, okuthetha ukuba ijaji igqiba kwelokuba ukubulawa kweyeza kukaMonsanto kungunobangela womhlaza kaEdwin Hardeman, isigaba sesibini setyala qalisa ngosuku olulandelayo. Inqanaba lesibini liza kugxila kwindlela aziphatha ngayo uMonsanto kunye nakowuphi na umonakalo.
Onke amaxwebhu ahambelana noko anokufumaneka kuthi Iphepha leMonsanto Papers.
January 29, 2019 -Singaphantsi kwenyanga kude ukuqala kwe Ityala lokuqala lomdibanisoKwimveliso ye-Roundup ityala, kwaye omabini amacala alayisha iifayile zenkundla ngamanqaku okubongoza kunye nemiboniso. Okubandakanyiweyo kwiifilitha zamva nje ngamaxwebhu athile angaphakathi eMonsanto. Zimbalwa zigqanyisiwe apha ngezantsi. Ukuthunyelwa okupheleleyo kwamaxwebhu enkundla kunokufumaneka kwi-USRTK ephambili Iphepha leMonsanto Papers.
Sukuma kwaye ukhwaze iglyphosate:Iimeyile zangaphakathi zeMonsanto kubhalwe ngo-1999 iinkcukacha zenkampani “zokufikelela kubunzululwazi” kunye neenzame zokuphuhlisa uthungelwano lwehlabathi “lweengcali zenzululwazi zangaphandle ezinempembelelo ekuqhubeni inzululwazi, abalawuli, uluvo loluntu, njl. Isicwangciso sifuna ukuba abantu "ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo / emva kwezigcawu" basebenze egameni leMonsanto. Inkampani yayifuna "abantu ukuba baphakame bakhwaze iGlyphosate ayiyityhefu," ngokwentambo ye-imeyile. Kwisicwangciso sokusebenza “kungafuneka baqhawule umtshato noMonsanto ngokunxulumana ngqo nengcali okanye siza kumosha i- $ 1,000 / ngosuku aba bantu bahlawulisayo.”
Le ntambo ye-imeyile inomdla ukusuka kuJanuwari 2015 uxoxa ngomsebenzi wezityalo wase Monsanto othathe umhlala-phantsi oxele kwinkampani ukuba ufumene ukuba une-leukemia yeseli esineenwele, uhlobo lwe-non-Hodgkin lymphoma. Ubhale ukuba "unegazi elingaqhelekanga" ngaphambi kokuba athathe umhlala-phantsi, kwaye wayezibuza ukuba ingaba ukuxilongwa kwakhe "kunxulumene nokusebenza kuyo yonke imichiza" kumzi-mveliso wale nkampani. Iqela lempembelelo "elibi" lajonga imeko yakhe kwaye uMonsanto "umongikazi wezempilo" wamxelela ukuba abafumananga unxibelelwano phakathi "kwemeko yakhe yonyango" kunye neekhemikhali kwisityalo awayesebenza kuso. Bakwabonisa ngentambo ye-imeyile ukuba akukho sidingo sokwazisa i-EPA. I-imeyile enye yomhla wama-21 ku-Novemba ngo-2014 ibhalwe ngokubanzi isiya kubasebenzi "beMonsanto" kwiqela elineziphumo ezibi lenza ukuba abasebenzi bazi ukuba nangona i-EPA ifuna ukuba kunikwe ingxelo malunga neziphumo ezibi zemveliso yezibulali zinambuzane ezinjengokwenzakala okanye iingxaki zempilo, abasebenzi akufuneki bazise i-EPA ngokwabo ukuba bayazazi naziphi na iingxaki ezinjalo. Abasebenzi kufuneka "bagqithisele kwangoko" ulwazi kwicandelo leziphumo ezibi zenkampani endaweni yoko.
Ngaba iMonsanto isebenzisane kwiSifundo se-AHS? UMonsanto kunye nomnini omtsha uBayer baphindaphinde ukufuna ukuphikisa amanqaku kwizifundo ezibonisa ubudlelwane phakathi kwe-glyphosate herbicides kunye nomhlaza ngokujonga isifundo esinye-uhlaziyo kwi-United States exhaswa ngurhulumente wezeMpilo kwezolimo (AHS) engafumananga manyano phakathi kwe-glyphosate kunye ne-non-Hodgkin lymphoma . I-AHS yinxalenye yesiseko sokhuselo lwenkampani kwityala leemveliso zeRoundup. Kodwa bekukho imibuzo emininzi malunga nexesha lohlaziyo lwe-AHS, olubaleke ngokujonga oontanga ngokukhawuleza kakhulu kunesiqhelo kumaphepha kwiijenali ezijongwe ngoontanga. Uhlaziyo ikhutshwe eluntwini kusasa nge-9 ka-Novemba ngo-2017-ngemini enye nenkundla yamatyala ebalulekileyo kumlo wesimangalo i-Roundup. Ibiyi icatshulwe nguMonsanto kuloo ngxoxo "njengophuhliso olubalulekileyo" kunye nesizathu sokulibazisa iinkqubo. Ngomhla we-11 kuMeyi 2015 yangaphakathi iMonsanto “Isindululo seeProjekthi zeNzululwazi ze-Post-IARCIxoxa ngokubakho kwe "AHS Intsebenziswano." UMonsanto wabiza isindululo esithi "sesona sinomtsalane" njengoko kubonakala ngathi iMonsanto "ibithe qelele" kolu phando.
Ngaphandle kwentetho eninzi malunga "nezifundo ezingama-800”Kubonisa ukhuseleko lwe-glyphosate Monsanto evunyiweyo kwifayile emfutshaneukuba "ayichonganga nayiphi na iinyanga ezili-12 okanye izifundo ezingapheliyo zetyhefu eziye zenziwa kwi-glyphosate equlethe iifom ezazifumaneka ukuthengiswa e-United States ngoJuni 29, 2017."
Iindaba ezahlukileyo zenqaku -Ingqina lezenzululwazi labangqina uGqirha uChristopher Portier akazokuza eSan Francisco ukuzokungqina kwityala njengoko bekucetyiwe. UPortier wahlaselwa sisifo sentliziyo ngelixa wayehamba e-Australia ekuqaleni kukaJanuwari kwaye usaphila.
Kwintshukumo eyamkelweyo ngamagqwetha amangali, iJaji yaseMelika uVincent Chhabria ngoMvulo uthe yena inokuvumela ubungqina malunga nesiporho sokubhala kukaMonsanto kwizifundo zesayensi kwisigaba sokuqala solingo oluzayo ngaphandle kwemizamo kaMonsanto yokugcina ubungqina kude kube ngaphandle kokuba isigaba sesibini setyala senzekile. Ubungqina bemizamo kaMonsanto yokuphembelela abalawuli kunye nososayensi banokuthi bavunyelwe kwisigaba sokuqala, utshilo uChhabria. U-Chhabria uyalele ukuba ityala lihlukaniswe, oko kuthetha ukuba inqanaba lokuqala liza kujongana nesityholo sokubangelwa. Ukuba ijaji ifumanisa ukuba i-Monsanto's herbicides ibangele ukuba umhlaza wommangali u-Edwin Hardeman, isigaba sesibini siza kubanjelwa ukuphonononga indlela yokuziphatha kukaMonsanto.
NgoJanuwari 18, 2019 -Ixesha libaleka xa kusondela ityala elikhulu.U-Jaji wase-US uVince Chhabria usete ubungqina bokumanyelwa kwe-28 kaJanuwari nge-9 kusasa ngexesha lendawo kwinkundla yomanyano eSan Francisco ukuba ilandelwe yindibano ka-"Daubert" ngalo mhla nge-2 emva kwemini. Ukuqwalaselwa kobungqina kunye neengcali eziza kuba yinto ephambili kwilingo lokuqala lokuthathwa kwamanyathelo athatha ukuba iMonsanto's glyphosate-based herbicides inokubangela umhlaza kwaye iMonsanto iwugubungele umngcipheko. Ukurekhodwa kwevidiyo kweenkqubo kuyavunyelwa.
I-Chhabria ithathe inyathelo elingaqhelekanga lokuvumelana nesicelo esivela kumagqwetha amele iMonsanto kunye nomnini wayo u-Bayer AG wokulichophela ityala. Isigaba sokuqala, ngesicelo sikaMonsanto, siya kujongana kuphela nobungqina bokubangela okukuko- ukuba ngaba iimveliso zayo zibangele ukuba umhlaza uhlaselwe ngummangali uEdwin Hardeman. Ubungqina bemizamo yeMonsanto yokulawula abalawuli kunye noncwadi lwenzululwazi kunye "nokubhala kwesiporho" amanqaku ahlukeneyo anokuboniswa kuphela kwisigaba sesibini setyala ukuba abagwebi kwisigaba sokuqala bafumanisa ukuba iyeza lokubulala ukhula lalinokubangela umhlaza kaHardeman.
Amaqela akavumelani malunga nobuphi ubungqina ekufuneka buvunyelwe kwinqanaba lesizathu.
IMonsanto icele ngokukodwa ijaji ukuba ingabandakanyi kubungqina:
I-imeyile ka-2001 echaza iingxoxo zangaphakathi ngokubhekisele kuphononongo oluzimeleyo lwezifo olupapashwe ngaloo nyaka.
I-imeyile yangaphakathi ka-2015 ngokubhekisele kubudlelane benkampani kunye nenkxaso mali kwiBhunga laseMelika lezeNzululwazi kunye neMpilo, iqela elizimeleyo ukuba lizimele kwimizi-mveliso njengoko likhuthaza umyalezo wokhuseleko malunga neemveliso zeglyphosate.
Ikhonkco le-imeyile le-2015 kubandakanya nengcaciso yangaphakathi yesazinzulu seMonsanto uBill Heydens malunga nendima yokudlalwa ngamagosa asebenza kwimveliso ye-glyphosate.
Kwinqaku loku-1, amagqwetha kaHardeman athe azizimiselanga kuzisa ubungqina "ngaphandle kokuba umnyango uvulwe nguMonsanto."
Kwinqaku 2, bathi kananjalo abazimisele ukwazisa imbalelwano ye-ACSH “ngaphandle kokuba iMonsanto nangayiphi na indlela ithembele kwizikhundla zenzululwazi ye-ACSH ngokubhekisele kwi-carcinogenicity” ye-glyphosate-based formulations “okanye ukuhlaselwa kuhlelo lwe-IARC lwe-glyphosate.”
Ngokubhekisele kwityathanga le-imeyile lika-Heydens ka-2015, igqwetha likaHardeman lithi imbalelwano iyakhanyisa kumbuzo osisizathu. I-imeyile ka-Heydens ibhekisa kwiziphumo zophononongo luka-2010 ekubhekiswa kulo njengoGeorge et al., Efumene ukwanda ngokwamanani amathumba kulusu lweempuku emva kokuvezwa kwimveliso yeRoundup eyenziweyo. Olu phononongo luxhomekeke kwiingcali zommangalelwa ngokubanzi.
Ileta emfutshane ibeka izikhundla ngamaqela aphikisayo ulapha.
Kwimicimbi eyahlukileyo-ukuvalwa umlomo kukarhulumente okuqhubekayo kunokuba nefuthe kumhla wokuvavanywa kwetyala likaHardeman. Ujaji Chhabria uthe akazimiselanga ukucela abagwebi ukuba bahlale kwilingo bengakhange bahlawulwe.
NgoJanuwari 16, 2019-(Ehlaziyiweyo ngoFebruwari 9, 2019) Amaxwebhu amatsha afakwe kwinkundla yomanyano asoyikisa ngokuveza intatheli yeendaba yeReuters uKate Kelland ngokusebenza njengopopi kaMonsanto ekuqhubeni ingxelo engeyonyani malunga nososayensi womhlaza u-Aaron Blair kunye ne-Arhente yeHlabathi yoPhando ngomhlaza (IARC) echaza i-glyphosate njenge-carcinogen enokwenzeka.
Ngo-2017, uKelland wabhala ibali elinempikiswano kuxelwe "kumaxwebhu enkundla," oko kubonakala ngathi wondliwe ngumphathi weMonsanto owanikezela ngoncedo amanqaku aphambili inkampani eyayifuna ukuyenza. Amaxwebhu uKelland akhankanyiweyo awazange afakwe enkundleni, kwaye ayengafumaneki esidlangalaleni ngexesha ebhala ibali lakhe kodwa ukubhala ukuba ibali lakhe lisekwe kumaxwebhu enkundla amvumela ukuba aphephe ukuveza indima kaMonsanto ekuqhubeni ibali.
Xa ibali laphuma, labonisa isazinzulu somhlaza u-Aaron Blair efihla "ulwazi olubalulekileyo" olungafumani makhonkco phakathi kwe-glyphosate kunye nomhlaza kwi-IARC. UKelland wabhala ukuba uBlair "uthe idatha yayiza kutshintsha uhlalutyo lwe-IARC" nangona ukuhlaziywa kokufakwa ngokupheleleyo kubonisa ukuba uBlair akazange athethe oko.
U-Kelland akabonisanga khonkco kula maxwebhu awakhankanyileyo, isenza ukuba abafundi bangakwazi ukuzibona ngokwabo ukuba uziva kude kangakanani ngokuchaneka.
Ibali lathathwa ngamajelo osasazo kwihlabathi liphela, kwaye lakhuthazwa yiMonsanto kunye neekhemikhali zamanye amahlakani. Iintengiso zikaGoogle zaze zathengwa zikhuthaza ibali.
Ngoku, ulwazi olutsha ityhilwe kwiifayile zenkundla ibonisa ukuba besinzima kangakanani isandla sikaMonsanto ekutyhaleni ingxelo. Kwifayile yenkundla kaJanuwari 15, amagqwetha ommangali akhankanya imbalelwano yangaphakathi yeMonsanto Umhla we-27 ka-Epreli ka-2017 bathi babonisa ukuba isigqeba seMonsanto uSam Murphey wathumela ingxelo efunekayo kuKelland kunye indawo yesilayidi yeendawo zokuthetha kunye nenxalenye yokufakwa kweBlair engafakwanga enkundleni. Amagqwetha athi imbalelwano ibonisa isigqeba seMonsanto simcela ukuba apapashe inqaku elityhola uGqirha Blair ngokukhohlisa i-IARC.
Amagqwetha kaMonsanto kunye neBayer azamile ukugcina imbalelwano noKelland etywiniwe kuluntu, kwaye ezinye ii-imeyile phakathi kwentatheli yeReuters neMonsanto azikakhululwa.
Amagqwetha ommangali nawo abhala kwileta yabo emfutshane ukuba amaxwebhu angaphakathi kaMonsanto abonisa ukuba uKelland ubonwa njengonxibelelwano oluphambili kwimithombo yeendaba kwimizamo yabo yokuhlazisa i-IARC.
Akukho nto iphosakeleyo ngokwendalo ekufumaneni iingcebiso zebali ezixhamla iinkampani ezivela kwiinkampani ngokwazo. Kwenzeka lonke ixesha. Kodwa oonondaba kufuneka bakhuthale ekuboniseni iinyani, hayi kubuxoki benkampani.
Eli bali lalisetyenziswa yiMonsanto ukuhlasela i-IARC kwimida emininzi, kubandakanya umzamo weMonsanto ukufumana iCongress ukuba ihluthe imali ukusuka IARC.
Okona kuncinci, uKelland wayefanele ukuba anyaniseke kubafundi kwaye avume ukuba iMonsanto yayingumthombo wakhe. I-Reuters ityala umhlaba-kunye ne-IARC-uxolo.Ngemvelaphi engaphezulu kwesi sihloko, jonga eli nqaku.
NgoJanuwari 10, 2019 -Kulabo bafuna iinkcukacha ezithe kratya malunga nokuqiqa kunye nokulungiswa kwesigqibo sejaji yenkundla yomdibaniso yokunciphisa ubuninzi bobungqina obunxulumene nokunxibelelana kwangaphakathi kukaMonsanto kunye nokuziphatha kwityala lokuqala lomdibaniso, oku kubhaliweyoUkuxoxwa kwetyala ngoJan. 4 ngalo mbandela kuyafundisa.
Nalu ke utshintsho phakathi kwegqwetha lommangali u-Brent Wisner kunye ne-jaji u-Vince Chhabria ebonisa ukukhathazeka kunye noloyiko lwamagqwetha ommangali angaphaya komda wobungqina babo ekuqondiseni ukungqinisisa, ubungqina obuninzi obujongana nokuziphatha kuka-Monsanto kunye nonxibelelwano lwangaphakathi oluthintelweyo. Ijaji ithe ubungqina buza kungena kuphela kwisigaba sesibini setyala ukuba abagwebi kwisigaba sokuqala bafumanisa ukuba iimveliso zeMonsanto's Roundup zinegalelo ngqo kumhlaza wommangali.
ISILUMKISO: Nanku umzekelo omkhulu: Ingcali yezobisi eyintloko kaMonsanto,
UDonna Farmer, ubhala kwi-imeyile: Asinakutsho ukuba nguRoundup
ayibangeli umhlaza. Khange silwenze uvavanyo oluyimfuneko
INKUNDLA: Ayizukungena-impendulo yam esiswini
kukuba ayizukungena kwisigaba sokuqala.
ISILUMKISO: Ke yiyo inkosi kaMonsanto
Isichazi magqirha - umntu onolwazi ngakumbi ngeRoundup
kunaye nabani na ehlabathini - esithi -
INKUNDLA: Umbuzo ngowokuba ingaba ubanga umhlaza,
hayi nokuba-hayi uluvo loMfama malunga nento enokuthethwa nguMonsanto okanye
ayitsho. Imalunga nento eboniswa sisayensi.
ISILUMKO: Ngokuqinisekileyo. Uthetha ngokoqobo malunga
inzululwazi abangakhange bayenze.
INKUNDLA: Amathumbu am kukuba ngenene a
umbuzo olula, kunye nempendulo kuloo ilula
Umbuzo ngowokuba lo nto ayingeni kwisigaba sokuqala. ”
NgoJanuwari 9, 2019 - Isilingo sokuqala somdibaniso kwi-Roundup yeLungelo lokuTyala ngeTyala sisenokuba ngaphezulu kwenyanga kude, kodwa ikhalenda ixakekile ngamagqwetha kumacala omabini. Jonga apha ngezantsi ishedyuli ebekwe yijaji kumyalelo ofakwe izolo:
ISIQINISEKISO SE-PREDRIAL ORDER NO. I-63: OKUZA KWIIMPAWU ZOKUQHUBA KWI-BELLWETHER TRIAL.
Ukumanywa kobungqina be-1/28/2019/09: 00: 04 eSan Francisco, kwigumbi lenkundla 17, kuMgangatho we-XNUMX phambi kweJaji uVince Chhabria.
Gqirha Shustov's UDaubert Iseti yokumamela i-1/28/2019/02: 00 PM eSan Francisco, kwigumbi lenkundla 04, kuMgangatho we-17 phambi kweJaji uVince Chhabria.
Ukukhethwa kweJury ukugcwalisa iphepha lemibuzo elongezelelweyo kwiofisi yejaji (engekho kwirekhodi okanye kwinkundla) ebekelwe 2/13/2019 08:30 AM eSan Francisco.
Ukukhethwa kweJury (ubunzima kunye nomceli mngeni kubangelwa ukuva ngegqwetha nakwiNkundla) ebekelwe umhla we-2/15/2019 ngo-10: 30 ekuseni eSan Francisco, kwigumbi lenkundla 04, kuMgangatho we-17 phambi kweJaji uVince Chhabria.
NgoJanuwari 7, 2019 - Unyaka omtsha uqale kwisiqalo esomeleleyo seMonsanto njengoko iyunithi yeBayer isiya kuvavanyo lwayo lwesibini malunga nezityholo zokuba iRoundup yayo kunye nezinye izinto zokubulala ukhula ezisisiseko se-glyphosate zibangela umhlaza. KwiNgoJanuwari 3 ulawulaUMgwebi weSithili sase-US u-Vince Chhabria uzikhabile iingxoxo ngamagqwetha amele amaxhoba omhlaza kwaye axhasa iMonsanto ekuthatheni isigqibo sokuthintela abagwebi ekuveni ubungqina obuninzi bokuba abamangali bathi babonisa iinzame zeMonsanto zokukhohlisa nokuphembelela abalawuli kwisigaba sokuqala setyala. Ukuthatha isigqibo sokulichophela ityala, u-Chhabria uthe abachopheli-tyala baya kuva ubungqina obunjalo ukuba bayavuma kuqala ukuba umbulali wokhula waseMonsanto wenze igalelo elibalulekileyo ekubangeleni ummangali engekho-Hodgkin lymphoma (NHL).
Ngeli xesha, ummangali u-Lee Johnson, Ngubani owaba lixhoba lokuqala lomhlaza ukuthatha iMonsanto ematyaleni, ngokuphumelela isigwebo samatyala ngokuchasene nenkampani ngo-Agasti, naye uphumelele isicelo sakhe kwiNkundla yesiBheno ye-1 yeziBheno ngokuphathwa ngokukhawuleza kwesibheno sikaMonsanto kwelo bhaso lejaji. UMonsanto wasiphikisa isicelo sikaJohnson sokuba "kukhethwe ikhalenda," kodwa inkundla yasamkela isicelo ngoDisemba 27, inika iMonsanto iintsuku ezingama-60 ukuba ifayilishe imfutshane yayo yokuvula.
UDisemba 20, 2018 - UMgwebi weSithili sase-US uVince Chhabria uthe ngoLwesine akazukuphumeza isigwebo de kube nguJanuwari kumcimbi ophikisanayo wokuchotshelwa kwetyala lokuqala, neliza kuqhubeka ngoFebruwari. Amagqwetha abamangali nawaseMonsanto ziyalelwe ukufaka zonke iingxelo zabo zeengcali ngolwesiHlanu, nge-21 kaDisemba ukunceda uChabria kwisigqibo sakhe.
UDisemba 18, 2018 -Abameli beMonsanto / Bayer baphendule ngolwesiHlanu kwizicelo zokuchongwa malunga namakhulu aliqela eerekhodi zangaphakathi zeMonsanto, befuna ukugcina uninzi lwabo lutywinwe ngokuchasene nezicelo ezivela kumagqwetha abamangali. Amagqwetha enkampani avumile ukukhutshwa kwamaxwebhu angaphakathi, anokwaziswa esidlangalaleni kule veki.
Okwangoku omabini amacala alindele isigwebo esivela kwiJaji yeNkundla yeSithili sase-US uVince Chhabria nge-a isindululo esenziwe ngamagqwetha eMonsanto ukubuyisela umva ibifurcate kwinkundla yokuqala yenkundla kwityala lokulwa nomhlaza kwiRoundup. Elo tyala limiselwe ukuba liqale ngoFebruwari 25 kwaye lithathwa njengentsimbi eya kuthi ibeke inqanaba lendlela kwaye ukuba amanye amatyala ayaqhubeka kwaye / okanye asonjululwe.
UMonsanto angathanda ukuba inkundla yomanyano izilingo zenziwe ngezigaba ezibini- isigaba sokuqala esigxile kwisizathu sonyango- ngaba iyeza lokubulala ukhula lenkampani labangela umhlaza wommangali othile- kunye nesigaba sesibini sokujongana noxanduva kuphela xa abamangali boyisile kwisigaba sokuqala.
Imiba yesizathu kunye nomonakalo wembuyekezo "yahlukile kwaye yahlukile kwisityholo sokungakhathali kukaMonsanto kunye nokuziphatha kwenkampani kwaye bekuya kubandakanya ubungqina obuvela kumangqina ahlukeneyo," yatsho inkampani. Ukubhabha phakathi kuya kuthintela "ukulibaziseka okungafanelekanga ekusombululeni eli tyala…"
Igqwetha labamangali Inxamnye nokuhluthwa Ukuthi olu luvo "aluvakali" kwizimangalo zamanje zesithili (MDL), yiyo le nto uChabria ejongene nayo. Ngaphezulu kwamatyala e-600 asalindelwe kwinkundla yakhe ethetha ukuba i-Monsanto's glyphosate-based herbicides ibangele umhlaza wabamangali, kwaye iMonsanto yahluleka ukulumkisa abathengi ngeengozi zeemveliso zayo.
"Ayikaze yenziwe, kwaye ngesizathu esihle," amagqwetha axoxa kwinkundla ye-13 kaDisemba. “Injongo yetyala le-bellwether kukuvumela icala ngalinye ukuba livavanye iingcinga zabo kunye nobungqina ngokuchasene nejaji yokwenyani yelizwe kwaye, ngethemba, bafunde ulwazi olubalulekileyo malunga namandla kunye nobuthathaka beli tyala ukwazisa isisombululo esidibeneyo. Ukunyanzelisa umqobo kwicala elinye-lenkqubo-eya kuba ngumthengisi we-facto kumatyala ayi-10,000 4 aqhubeka kwilizwe liphela-ayiyifezekisi loo njongo. Inika nasiphi na isigwebo kule MDL, nokuba leliphi icala eliphumelelayo, alincedisi. ” Ukumanyelwa kwetyala elilandelayo kulungiselelwe uJan. XNUMX.
Nge-14 kaDisemba ngo-2018-Ummangali ufuna ukuPhathwa ngokuKhawulezayo kwesiBheno seMonsanto njengoko impilo yakhe isiba mandundu
UDewayne “Lee” Johnson, ummangali wokuqala ukuthatha uMonsanto ayokumangalela etyhola inkcenkceshela ngokubulala iintsholongwane ezibangela umhlaza, kucwangciselwe ukuba kwenziwe utyando namhlanje ukususa ukukhula komhlaza kwenye yeengalo zakhe.
Impilo kaJohnson iye yawohloka okoko kwagqitywa ityala ngo-Agasti kunye nokuphazamiseka kunyango ngenxa yokuphelelwa lixeshana kwi-inshurensi. Akafumananga nayiphi na imali evela kwisimangalo ngenxa yesibheno iMonsanto eyanyanzeliswa emva kokuphumelela kwenkundla kaJohnson. UMonsanto ubhenela kwisigwebo se- $ 78 yezigidi, esancitshiswa yijaji yetyala elivela kwi-jury's award of $ 289 yezigidi.
UJohnson wafaka inkundla ngo-Okthobha ukuba uyakwamkela ukuncitshiswa. Kodwa ngenxa yokuba uMonsanto ubhenile, amagqwetha kaJohnson nawo afake isibheno, efuna ukubuyisela ibhaso lejaji.
Inkundla yeziBheno yaseCalifornia. 1st Isibheno, inombolo yetyala A155940. Amagqwetha kaJohnson afuna ukusingathwa okukhawulezileyo kwesibheno kwaye banethemba lokuba bazokwaziswa kungekudala ngo-Epreli. “Kukho… amathuba okuba uMnu Johnson uzakufa ngo-2019,” the Isindululo sommangali sithi. UJohnson, oceba ukuqala kwakhona i-immunotherapy emva kotyando, ayimfuneko kwisivumelwano.
“Andikuthandi ukucinga ngokufa,” utshilo ku dliwano ndlebe epapashwe kwiTime Magazine. “Naxa ndiziva ngathi ndiyafa, ndiye ndizenzele ukudlula ngaphaya kwayo. Ndivakalelwa ngathi awunakukunikezela, ukuxilongwa, isifo, kuba emva koko ufile. Andizidibanisi nelifu lokufa, iingcinga ezimnyama, uloyiko. Ndiceba ubomi obumnandi. ”
Nge-13 kaDisemba 2018 -Izihlangu ezingaphezulu zeMonsanto (amaXwebhu) Cwangcisa ukuDrop
Nge-12 kaDisemba ka-2018-iJaji eNtsha yonyulwa kwityala likaPilliod
Umgwebi weNkundla ePhakamileyo yase-Alameda County u-Ioana Petrou, ochithe ngaphezulu konyaka ebandakanyeka kwityala lomhlaza we-Roundup kwaye ehleli kwiintsuku ezininzi zokuboniswa kobungqina besayensi ngabamangali kunye neengcali zokhuselo kwinkundla yomanyano eva ngo-Matshi 2017, alikho ityala . Umphathi waseCalifornia uJerry Brown ubhengeze nge-21 kaNovemba ukuba uPetrou wonyulwe njengomthetho wobulungisa, iCandelo lesiThathu leNkundla yokuQala yeziBheno.
Ujaji Winifred Smith utyunjwe ukuba athathe indawo kaPetrou ukuba ajonge ityala lika-Pilliod V. Monsanto, nelicwangciselwe ukuba lixoxwe ngomhla wesibhozo kweyoKwindla e-Oakland, California. USmith wonyulwa yiRhuluneli uGrey Davis ngo-Novemba ka-8, kwaye phambi kokuqeshwa kwakhe, wasebenza njengosekela-gqwetha jikelele wesebe lezoBulungisa eSan Francisco.
Ityala likaPilliod liya kuba lelesithathu ukuya kuthethwa enkundleni kwityala lokutshutshisa iRoundup. U-Alva Pilliod kunye nenkosikazi yakhe u-Alberta Pilliod, bobabini abakwiminyaka yama-70 kunye nabatshatileyo iminyaka engama-48, batyhola ukuba umhlaza wabo - iifom ze-non-Hodgkin lymphoma- zibangelwa kukuvezwa kwabo ixesha elide kwiRoundup. Ubudala babo obuphambili kunye nokuxilongwa komhlaza kugunyazisa ityala elikhawulezayo, ngokwefayile yenkundla ngamagqwetha abo. UMonsanto wasichasa isicelo sabo somhla wokuvavanywa okhawulezileyo kodwa uPetrou wafumanisa ukuba izigulo zabo kunye neminyaka yabo ziyathandwa. U-Alberta unomhlaza wobuchopho ngelixa u-Alva enesifo somhlaza esihlasele i-pelvis kunye nomqolo. U-Alva wafunyaniswa ngo-2011 ngelixa i-Alberta yafunyaniswa ngo-2015. Basebenzisa i-Roundup ukusuka phakathi kwiminyaka yoo-1970 ukuya kwiminyaka embalwa edlulileyo.
Isimangalo sikaPilliod siphinda abanye bathi "iMonsanto ikhokele umkhankaso othathe ixesha elide wolwazi olungelulo ukuqinisekisa iarhente zikarhulumente, amafama kunye noluntu ngokubanzi ukuba iRoundup ikhuselekile."
Nge-11 kaDisemba ngo-2018-Amagqwetha aShukuma phambi kovavanyo olulandelayo
Ngolingo olulandelayo kwisityholo sobunzima besifo somhlaza se-Roundup esibekelwe uFebruwari 25 eSan Francisco, amagqwetha eMonsanto kunye nabamangali bayangxama ukuthatha ngaphezulu kweshumi elinambini lokufakwa kwiiveki eziphelileyo zikaDisemba nangoJanuwari nanjengoko bexoxa ngendlela ityala elifanele zilungelelaniswe.
Amagqwetha eMonsanto nge-10 ka-Disemba afake isikhalazo "sokuguqula bifurcate" ityala elilandelayo, Edwin Hardeman V. Monsanto (3: 16-cv-00525). IMonsanto ifuna ijaji kuphela ukuva ubungqina obujolise kwisizathu esithile sonyango kuqala - ngaba iyeza lokubulala ukhula lwayo labangela umhlaza kommangali - ngenqanaba lesibini eliza kujongana noxanduva lukaMonsanto kunye nomonakalo kuphela xa ijaji ifunyenwe kummangali kwisigaba sokuqala. Yabona Ingxoxo kaMonsanto apha. Ujaji Chhabria unikezele ngesicelo esivela kumagqwetha ommangali ukuba avunyelwe de kube nguLwesine ukuba afake impendulo.
U-Edwin Hardeman kunye nenkosikazi yakhe bachitha iminyaka emininzi behlala kwihektare ezingama-56, indawo eyayibalekela izilwanyana eSonoma County, eCalifornia apho uHardeman wayehlala esebenzisa iimveliso zeRoundup ukunyanga ingca kunye nokhula ukusukela ngeminyaka yoo-1980. Wafunyaniswa ukuba une-B-cell non-Hodgkin lymphoma ngoFebruwari 2015, kwinyanga nje ngaphambi kokuba i-Arhente yaMazwe ngaMazwe yoPhando ngomhlaza ibhengeze ukuba i-glyphosate yinto enokubangela i-carcinogen yabantu.
Ityala likaHardeman lakhethwa njengelokuqala ukuxoxwa kwinkundla yomanyano eSan Francisco (kwisiThili saseMantla saseCalifornia) phambi kweJaji uVince Chhabria. Igqwetha u-Aimee Wagstaff waseDenver, eColorado, ukhokele igqwetha lommangali kweli tyala. Igqwetha uBrent Wisner wenkampani yezomthetho iBaum Hedlund eLos Angeles, kunye negqwetha elikhokele uloyiso kwimbali ka-Agasti ka-Dewayne Lee Johnson yokuphumelela iMonsanto, bekulindeleke ukuba bancede ukuzama eli tyala kodwa ngoku elinye ityala liza kuqala ngoMatshi. Elo tyala nguPilliod, et al V. Monsanto kwiNkundla ePhakamileyo yase-Alameda. Bona amaxwebhu ahambelana nawo Amaphepha eMonsanto iphepha eliphambili.
Umnini omtsha kaMonsanto uBayer AG akonelisekanga kukuxhomekeka kwiqela letyala likaMonsanto elaphulukana netyala likaJohnson kwaye lizisa iqela lalo lezomthetho. Iqela leBayer, elincede inkampani yaseJamani ukuba iphumelele kumlo weXarelto ngegazi, ngoku kubandakanya uPamela Yates kunye noAndrew Solow weArnold & Porter Kaye Scholer noBrian Stekloff kaWilkinson Walsh Eskovitz.
Ukuchotshelwa kwemicimbi ethile yokuzibophelela kusetelwe kwityala likaHardeman ngoFebruwari 4, 6, 11, kunye no-13 ngokukhethwa kwejaji okucwangciselwe uFebruwari 20. Iingxoxo ezivulekileyo ziya kuthi emva koko ziqale ngoFebruwari 25, ngokweshedyuli yangoku.
UDisemba 6, 2018-Imihla yokuLingwa kweMonsanto ezayo
I-3/18/2019-CA JCCP-I-Pilliod (abamangali aba-2)
4/1/2019 - Inkundla yesiXeko iSt
4/22/2019-Inkundla yaseSt. Louis County-Gordon
Nge-5/25/2019-Inkundla yaseSweden-uStevick okanye uGebeyehou
9/9/2019-Inkundla yaseSt. Louis yeNkundla-abamangali aba-4
1/21/2020 - Inkundla yesiXeko iSt
3/23/2020 - Inkundla yesiXeko iSt
Nge-21 kaNovemba ka-2018-udliwanondlebe kaLee Johnson
UDewayne “Lee” Johnson wayengumntu wokuqala ukuthatha uMonsanto enkundleni esithi ukuvezwa kweyeza leRoundup kwabangela ukuba aphuhlise i-non-Hodgkin lymphoma kwaye le nkampani yagquma ubungozi. Ngo-Agasti u-2018, ijaji e-San Francisco ngazwi linye yafumanisa ukuba iMonsanto yehlulekile ukulumkisa malunga neengozi ze-carcinogenic ye-Roundup herbicide kunye neemveliso ezinxulumene nayo, kwaye banika uJohnson i-289 yezigidi zeedola. Ijaji kamva lanciphisa eso sixa saya kwi-78 yezigidi zeedola. UCarey Gillam uthethe noJohnson malunga nemva kwetyala lakhe kudliwanondlebe neMagazini yeXESHA:Ndiphumelele ityala laseMbali kodwa ngeNgekhe ndigcine iMali